राजेशको घरमा विप्लव समूहले नै गराएको थियो बम विस्फोट ? | Ratopati
राजेशको घरमा विप्लव समूहले नै गराएको थियो बम विस्फोट ?
personसुजन पन्त exploreकाठमाडौं access_timeमंसिर २९, २०७६ chat_bubble_outline0
काठमाडौँ । शुक्रबार मध्यरातमा धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका–५, महेन्द्रनगरका राजेश साहको घरमा बम विस्फोट भयो । बम विस्फोटमा परेर प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) सहित तीनजनाले ज्यान गुमाए ।
साहसँगै १५ वर्षीय छोरा आनन्द र प्रहरी निरीक्षक अमिर दाहालको ज्यान गएको छ । राजेश र आनन्दको घटनास्थलमै निधन भएको हो भने इन्सपेक्टर दाहालको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।
यस्तै बम विस्फोटमा परेर ४ जना घाइते भएका छन् । राजेशका बाबु भिखारी, छोरा प्रकाश, छोरी अञ्जली र प्रहरी जवान रिजनाथ महतो घाइते भएका हुन् । उनीहरुको उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
आखिर कसले राख्यो त साहको घरमा बम ?
साहको घरमा कसले बम विस्फोट गरायो भनेर यतिबेला विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेको छ । स्थानीयका अनुसार राजेशले रकम लगानी गर्ने र व्यापार व्यवसाय गर्ने भएकाले ऋण लिनेहरूबाटै विस्फोट गराइएको हो कि भन्ने आशङ्का छ ।
यता प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट साहको घरमा बम राख्ने नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताको संलग्नता रहनेसक्ने आशङ्का गरेको छ ।
प्रहरीले शनिबार दिउँसो घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीका अनुसार उनीहरु विप्लव समूहका नेता हुन् ।
पक्राउ पर्नेमा हंसपुर नगरपालिका–२ की ललितादेवी महरा, सीतादेवी महरा र मिथिला बिहारी नगरपालिका–१, भुतहीका रामशोभित धानुक रहेका छन् ।
५१ वर्षीया सीतादेवी विप्लव समूह प्रदेश २ की संयोजक हुन् भने ४१ वर्षीया ललिता केन्द्रीय सदस्य हुन् । प्रहरीका अनुसार रामशोभित भने कार्यकर्ता मात्र हुन् ।
धनुषाका डीएसपी रामेश्वर कार्कीका अनुसार उनीहरुलाई घेरा हालेर पक्राउ गरिएको हो । अहिलेसम्म घटनाको कसैले जिम्मा लिएको छैन ।
इन्सपेक्टरको संयोजकत्वमा अनुसन्धान
प्रहरीले विस्फोटको घटना अनुसन्धानका लागि प्रहरी निरीक्षक उमाशङ्कर साहको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय अनुसन्धान टोली गठन गरेको छ ।
पक्राउ परेकाहरु माथि इन्सपेक्टर साहको टोलीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको डीएसपी कार्कीले बताए ।
बम शुक्रबार राति ११ बजे जडान गरिएको र १२ बजे पड्किएको प्रहरीको भनाइ छ ।
राजेश साहको नवनिर्मित घरको बाहिरको फलामको गेटमा एउटा झोला झुन्ड्याइएको थियो । मध्यरातमा राजेशकी श्रीमती शौचका लागि उठिन् । ढोकामा प्रेसरकुकरसहित झुन्डिएको देखेर श्रीमानलाई पनि उठाइन् ।
राजेशले तत्कालै प्रेसरकुकरसहित झोला झुन्ड्याइएको देखेपछि घरमा सुतिरहेका छोराछोरीलाई बाहिर निकालेर इलाका प्रहरी कार्यालय पुगेर घटनाबारे बताए ।
इलाका प्रहरी कार्यालय सुखुवा महेन्द्रनगगरका इन्सपेक्टर अमिर दाहाल खबर पाउनासाथ नेपाली सेनालाई पनि खबर गरेर आफै घटनास्थल पुगे । इन्स्पेक्टर दाहालले खबर गरेपछि महेन्द्रनगरमै रहेको नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोली तयार हुँदै थियो ।
ढोकाको मुख्य गेटमा झुन्ड्याइएको झोलामा केही छैन भन्दै इन्सपेक्टर अघि अघि र २ जना प्रहरी जवान पछि पछि गएर हेर्न खोज्दाखोज्दै बम विस्फोट भएको हो ।
झोलामा प्रेसर कुकर देखे पनि इन्सपेक्टर दाहालले तर्साउन राखेको हुनसक्ने अनुमान गरेको प्रहरीले बताएको छ ।
बम विस्फोटबाट घटनास्थलमै २ जनाको मृत्यु भयो भने अन्य घाइते भए । घाइते मध्येका इन्सपेक्टर दाहालको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो ।
बम विस्फोटबाट साहको बन्दै गरेको घरका झ्यालका सिसा, शौचालयका ढोका, घरको छानोलगायतमा पनि क्षति भएको छ ।
केही प्रत्यक्षदर्शीले प्रहरीले छोएलगत्तै बम विस्फोट भएको बताए पनि आफै पड्किएको प्रहरीको दाबी छ । टाइमर सेट गरेर वा रिमोटबाट बम पड्काएको डीएसपी कार्कीको भनाइ छ ।
सेनाले पनि थाल्यो छुट्टै अनुसन्धान
घटनास्थलबाट पड्केको बमको टुक्रा र अवशेष सङ्कलन गरेर नेपाली सेनाले पनि अनुसन्धान थालेको छ । बमका टुक्रा र कणलाई नेपाली सेनाका विशेषज्ञले सङ्कलन गरेर अनुसन्धान थालेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिए ।
इन्सपेक्टर दाहालको अन्त्येष्टि
सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका घर भएका ४५ वर्षीय प्रहरी निरीक्षक दाहालले ०५५ कात्तिक १ गतेदेखि नेपाल प्रहरीका जागिर सुरु गरेका थिए । असईबाट प्रहरीमा प्रवेश उनी ०७५ मा प्रहरी निरीक्षकमा बढुवा भएका हुन् ।
रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर, धनुषाको धनुषाधाम हुँदै दाहाल पछिल्लो समय इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरको इन्चार्ज भएर पुगेका हुन् ।
इन्सपेक्टर दाहालको शनिबार काठमाडौँस्थित पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार गरिएको छ । दाहसंस्कारमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललगायत पशुपति पुगेका थिए ।
सिरहामा पनि विस्फोट, जताततै त्रास
पछिल्लो समय बम भेटिने तथा विस्फोट हुने क्रम बढेको छ । खास गरेर सरकारी कार्यालयहरुलाई लक्षित गरेर बम राख्ने तथा विस्फोट गराउन थालिएको छ । यसले सार्वसाधारणमा त्रास बढेको छ ।
शुक्रबार राति साहको घरमा विस्फोट भएकै समयमा सिरहाका लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका कार्यालयमा बम विस्फोट गराइएको छ । सिरहा प्रहरीका अनुसार कार्यालयको माथिल्लो तलामा भएको विस्फोटबाट झ्याल र ढोकामा क्षति पुगेको छ ।
घटनास्थलबाट इन्टेल मोबाइलको ब्याट्री, किप्याड, तार र सुतली भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
#धनुषा#बम विस्फोट#धनुषा बम विस्फोट